ဟွန်ဒူးရပ်စ် GST | ငါ၏အ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်? | USAHello
TPS ဟွန်ဒူးရပ်စ် - သင့် TPS ကုန်ဆုံးတဲ့အခါသင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဤတွင် TPS အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဟွန်ဒူးရပ်စ်မှလူအဘို့ဖြစ်၏.
ဓာတ်ပုံ: Belinda Osorio Hanzman ၏ယဉ်ကျေး
ဟွန်ဒူးရပ်စ် GST – ငါ၏အ TPS တဲ့အခါမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါဘူး?
Update ကိုနိုဝင်ဘာလ 4, 2019: TPS for Honduras has been extended.
The US government publishedanotice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, ဟေတီ, နီကာရာဂွာ, ဆူဒန်, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled. If you have TPS for Honduras, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.
TPS ကိုင်ဆောင်သူခိုလှုံခွင့်အဆင့်အတန်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, သူတို့ကဒီမှာတစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းခဲ့ကြပါပြီအထူးသဖြင့်လျှင်. သငျသညျထက်နည်းတစ်နှစ်ဒီမှာဖြစ်ရပြီဆိုပါက, သင် ... သင့်တယ် NOW ကကျင့်သုံးပါ. သို့သော်, သင် USCIS မကြာသေးမီကခိုလှုံခွင့် applications များလုပ်ငန်းများ၌ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားပြီကိုသိသောအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ယခု, သူတို့ပထမဦးဆုံးလတ်တလော applications များပြန်လည်သုံးသပ်နေကြသည်. သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးတာနဲ့, သင့်ရဲ့အမှုကိုကြားမီကအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါကြောင့်, သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးဆိုရင်မဟုတ်ရင်သင်သည်သင်၏အမှုကိုကြားရှိခြင်းအန္တရာယ်များနှင့်ထို့နောက်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသောကွောငျ့သငျသညျခိုလှုံခွင့်အရှိဆုံးသာလျှောက်ထား. ဤတွင်ဖြစ်ပါသည် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ပုံစံ (ဒီဥပဒေရေးရာပုံစံဖြစ်ပြီးသင်ပုံစံဖြည့်စွက်ကူညီပေးဖို့ရှေ့နေခဲ့လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်).
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 3007 Tilden စိန့်ကဘ, ဝါရှင်တန်, DC က 20008.
ဤတွင်မှ link တစ်ခုဖြစ်ပါသည် t ကိုTPS အကြောင်းကိုသူကသံရုံးဖွင့်စာမျက်နှာ.
ဟွန်ဒူးရပ်စ်၏သံရုံးကိုလည်းအခြားမြို့များကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှိပါတယ်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး၏စာရင်း.